Wolrdpay ayaa mas'uul ka noqon doonta maareynta lacagaha laga helo internetka ee DJI | Qalabka bilaashka ah
DJI, oo ay weheliso shirkadda aduun lacageed, ayaa hadda sii daayay war-saxaafadeed ku dhawaaqaya in labaduba ay gaareen heshiis wadashaqeyn ah si kan dambe uu mas'uul uga yahay maareynta dhammaan lacagaha DJI ee khadka tooska ah, waa wax, dhinaca kale, ka caawin doona shirkadda Shiinaha ee ku takhasustay adduunka diyaaradaha, ballaarin karta madal e-commerce oo macaamiil badan la gaarsiiyo adduunka oo dhan.
Fikradda ay ku leeyihiin DJI maahan mid kale oo aan ka aheyn inay ka faa'iideystaan ​​awoodaha ay Wolrdpay u siiso lammaane teknolojiyad iyada oo ay ugu mahadcelinayaan rikoodh raadraac caan ah iyo wixii ka sarreeya oo dhan faa'iidooyinka ay leedahay kaarkaaga maxalliga ah ee habka lacag bixinta ay bixin karto. Waad ku mahadsantahay wadashaqeyntaan DJI waxay awoodi doontaa inay kula xiriirto macaamiisha meelo kala duwan oo adduunka ah adoo ka dhigaya alaabtaadu inay u muuqdaan kuwo aad u heli kara dhammaan noocyada astaamaha xirfadeed.
DJI iyo Wolrdpay waxay iskaashi la leeyihiin inay keenaan lacag bixinta elektarooniga ah barnaamijka DJI
Sida faallay Christina Zhang, Qasnajiga DJI ee hada:
Suuqa diyaaradaha aan duuliyaha laheyn ee adduunka ayaa qarxay sannadihii la soo dhaafay; macaamiisha waxay helayaan habab hal abuur leh oo ay ugu adeegsadaan tikniyoolajiyadda una soo bandhigaan aragtiyo cusub nolol maalmeedkooda. Tani waa wakhti aad u xiiso badan warshadaha. Maaddaama tiknoolajiyaddeennu ay fududaanayso in la isticmaalo, iyada oo ay ugu wacan tahay ballaarinta codsiyada waaxda, waxaan dooneynaa in diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ay u sahlanaato dadka adduunka ku nool, shaqo ahaan iyo ciyaar ahaanba. Mustaqbalka dhow, waxaan rajeyneynaa inaan la xiriirno macaamiil badan oo cusub oo Yurub iyo Aasiya-Baasifig ah, iyo sidoo kale inaan u abuurno khibrad aan xaddidneyn oo aamin ah macaamiisheenna internetka iyadoo la adeegsanayo xalka lacag-bixinta Worldpay.
Dhinaca kale, Shane Happach, Madaxweyne Ku-Xigeenka Fulinta iyo Agaasimaha Global Enterprise eCommerce ee Worldpay, Inc., ayaa sheegay waxyaabaha soo socda:
La dagaalanka kuwa wax khiyaanada ku sameeya ee internetka waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu waaweyn ee ay ka walaacsan yihiin soo saarayaasha qalabka korontada, gaar ahaan marka ay timaado tiknoolajiyada aadka u hooseeya sida diyaaradaha aan duuliyaha lahayn. Caqabada ganacsiyada kobcaya waxay isku dheelitireysaa iibka mugga badan leh awoodda lagu hubinayo adeeg aamin ah oo lagu kalsoonaan karo ee iibsadayaasha. Worldpay waxay ka caawisay kumanaan shirkado adduunka oo dhan inay gaaraan isku dheelitirnaan; Marka, kordhinta DJI illaa iyo maanta waxay muujineysaa sida muhiimka u ah habka istiraatiijiyadeed ee khiyaanada loogu talagalay guusha ballaarinta urur.
Wadada buuxda ee maqaalka: Qalabka bilaashka ah » Drones » Wolrdpay ayaa mas'uul ka noqon doonta maareynta lacagaha laga helo internetka ee DJI
PP waxay dooneysaa inay dhiirrigeliso daabacaadda 3D ee sanduuqyada iyadoo lagu darayo injineerada kooxaha daryeelka caafimaadka ee hadda jira